» सरकारले किन चाहेको जति पैसा छाप्दैन ? (भिडियो)
सरकारले किन चाहेको जति पैसा छाप्दैन ? (भिडियो)
५ श्रावण २०७६, आईतवार २१:२३
चन्द्र घलान, मकवानपुर, ५ साउन । दर्शकबिन्द, संसारका प्राय सबै देशसँग आफ्नो मुलुकको पैसा छाप्ने मेसिन छ । तर किन सरकारले चाहेको जति पैसा छाप्न सक्दैन ? एकपटक सोच्नुहोस् त यदि सरकारले चाहेको जति पैसा छापेर नेपालका गरिब जनतालाई एक अरबका दरले बाँडिदिने हो भने सायद नेपालको गरिबि सकिन्थ्यो कि ? यदि सरकारले चाहेको जति नोट छापेर सबैलाई बाँडिदिने हो भने पैसाका लागि हुने भागदौड र हत्या हिंसा सकिन्थ्यो कि ? गरिब र धनीबिचको खाडल पुरिन्थ्यो कि ? तपाईको मनमा यस्तै प्रश्न आएको हुनुपर्छ । म पनि सधैँ सोच्ने गर्थेँ कि किन हरेक देशले चाहेको जति पैसा छाप्दैन ? किन सधैँ पैसाको अभाव हुन्छ ? के पैसाको नोट छाप्नबाट नेपाल वा अन्य देशलाई कुनै अर्को देश, सँगठन वा पार्टीको स्विकृति चाहिन्छ ? एउटा कुरा तपाईलाई सुरुमै क्लियर गरौँ कुनै पनि देशले अनगीन्ति पैसा छाप्न सक्छ तर कुनै पनि देश त्यसो गर्न चाहाँदैन । खासमा किन कुनै देशले भनेको जति पैसा छाप्दैन ? आउनुहोस् आज यस बारेमा खुलेर चर्चा गरौँ । हेरौँ भिडियो–
नेपालमा पैसा छाप्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैँकसँग छ । यो बैँक नेपाल सरकारको मातहतमा चल्छ र देशको मौद्रिक अवस्था अनुसार कति पैसा छाप्ने भन्ने विज्ञहरुको अन्तिम अर्थतन्त्रको विश्लेषण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा पैसा छाप्छ । किन मनलाग्दी पैसा छाप्न मिल्दैन भन्ने बारेमा विचार गरौँ । कुनै पनि देशमा उपलब्ध श्रोत साधन र सेवाको योगफल सधैँ उक्त देशमा भएको वा छापिने रकमसँग बराबर हुनु जरुरी छ । यदि यी दुई मध्ये कुनै पनि कुरा थप वा बढी भएमा त्यसले देशमा ठूलो समस्या ल्याउँछ । उदाहरणका लागि मानिलिउँ कुनै देशमा ५ जना जनताहरु छन् । र ती प्रत्येक व्यक्तिसँग २०० रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति पैसा छ । यी सबैसँग भएको पैसा जोड्दा एक हजार हुन्छ । अर्कोतिर त्यही देशमा खानाका लागि १०० केजी चामल उत्पादन हुन्छ वा त्यति मात्र चामल छ । मानौँ त्यो एक सय केजी चामललाई एक हजार रुपैयाँ पर्छ । अर्थात एक हजार रुपैयाँ पैसाको एक सय केजी चामल आउँछ । ती सबैले आफुसँग भएको पैसाका आधारमा चामल किन्ने हुँदा सबैले किन्दा चामल र पैसा बराबर हुन्छ । तर यदि सरकारले मनलाग्दी नोट छापेर ती ५ जना जनतालाई बाँडिदिने हो भने त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ अब विचार गरौँ । मानौँ सरकारले पैसा छापेर बाँडेपछि ती प्रत्येक मान्छेहरुसँग २–२ हजार रुपैयाँ भयो । अब प्रत्येक मानिसको जम्मा रकम जोड्दा उनीहरुसँग १० हजार रुपैयाँ पैसा रहन्छ । अर्थात यदि प्रत्येकसँग २ सय हुँदा १०० केजी चामलको एक हजार रुपैयाँ पथ्र्यो भने अब प्रत्येकसँग दुई हजार पैसा हुन्दा १०० केजी चामलको १० हजार रुपैयाँ पर्छ । अर्थात जति पैसा छापियो त्यति धेरै सामान महंगो हुन्छ । किन कि पैसा छापिएर बढेता पनि १०० केजी चामल सधैँ १०० केजी नै रहन्छ । यसो हुन नदिन सरकारले पैसा बढी छापेमा उत्पादन पनि बढी गर्नुपर्छ र उत्पादन कम छ भने पैसा पनि कम छाप्नुपर्छ ।
यदि सरकारले आफ्नो देशमा भएको उत्पादन, श्रोत वा साधनले धान्न सक्नेभन्दा बढी परिमाणको पैसा छाप्यो र त्यो पैसा ५ जना जनतालाई १० हजारका दरले बाँडिदियो भने त्यो १० हजार पाउनेमध्ये कुनै एकले १०० केजी चामल सबै किनिदिन्छ र अन्य ४ जनाका लागि चामल पाईँदैन । फलस्वरुप पैसा भएता पनि ४ जनामा भोकमरी समस्या आईपर्छ । वा ती ४ जनाले विद्रोह गरेर चामल किन्ने व्यक्तिलाई सताउन वा हानी नोक्सानी गर्न सक्छ । यसरी धेरैजसो वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि भएको छ र त्यस्तो वृद्धि लगातार भएको छ भने त्यस अवस्थालाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । बजारमा मुद्राको परिमाणमा वृद्धि भएपछि सँगसँगै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा आपूर्ति बढेन भने मुद्राको क्रयशक्ति कम हुन्छ र यही अवस्थालाई पनि मुद्रास्फीति भनिन्छ । अर्को अर्थमा वस्तुको मूल्य बढ्नु र पैसाको मूल्य (क्रयशक्ति) घट्नु नै मुद्रास्फीति हो । यस्तो अवस्थामा वस्तु महँगो पर्ने भएकाले थोरै सामानका लागि पनि धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । मुद्रास्फीतिको अवस्था त्यतिबेला मात्र सृजना हुन्छ, जतिबेला उत्पादनको तुलनामा मौद्रिक आम्दानी (प्रवाह) वृद्धिदर बढी हुन्छ । जुन पैसा बढी छाप्नुसँग पनि सम्बन्धित छ । मुद्रास्फीति हुन नदिनु सरकारको काम हो । त्यसैले सरकारले कहिले पनि मनलाग्दी पैसा छाप्न मिल्दैन ।
कुनै पनि देशमा पैसा छाप्ने एउटा निश्चित प्रक्रिया हुन्छ । उदाहरणका लागि नोट प्रकाशनको लागि नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ अर्थात ईन्दरनेशनल मोनेटरी फण्ड) मा सुन राखेको हुन्छ । सबै नोटमा ‘नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त यसको रुपैयाँ भुक्तानी माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रुपैयाँ….तुरुन्त पाइनेछ’ भनेर लेखिएको हुन्छ । यसको मतलब उक्त नोट बराबरको बस्तु लिन आएमा हामी दिन सक्छांै भनिएको हो । यस बारेमा थप जानकारीको भिडियो म अर्को भिडियोमा हाल्ने छु ।
नेपाल सरकारले किन चाहेको जति पैसा छाप्न मिल्दैन भन्ने कुरा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ । अब के यसरी पैसा बढी छापेर गल्ती गर्ने देशहरु प्नि छन् ? उनीहरुले कस्तो समस्याको सामना गर्नुपर्यो भन्ने बारेमा पनि चर्चा गरौँ । सन्सारमा धेरै देशहरुले ईन्फ्लेसन अर्थात मुद्रास्फीतिको समस्या भोगेका छन् । ती मध्ये दुई वटा देशको चर्चा गरौँ जसले धेरै पैसा छापेकै कारण मुद्रास्फीतिको समस्या भोगेका थिए । हो, संसारको ईतिहासमा बढी पैसा छापेका कारण जर्मनी र जिम्बाबेले ठूलो समस्या भोग्नु परेको थियो । यसका बारेमा तपाईले ईन्टरनेटको प्रयोग गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ।
जर्मनी– पहिलो विश्व युद्धका दौरान जर्मनीले हारेपछि देशको आर्थिक अवस्था निकै नै दयनीय भयो र धेरै देशसँग सहयोगका लागि ऋण रकम लिनुपर्यो । तर निश्चित समयमा पैसा फर्काउनुपर्ने दबाबका कारण जर्मनीले आवश्यकताभन्दा बढी पैसा छाप्यो र ऋण चुक्ता गर्यो तर मुद्रास्फीतिका कारण जर्मनीको पैसाको क्रयशक्ति निकै कम भयो र अर्थतन्त्र झनै डामाडोल भयो ।
जिम्बाबे–जिम्बावेले सन् २००७ देखि २००९ सम्म निकै नै खतरनाक मुद्रास्फीतिको सामना गर्नुपरेको थियो । यसको समस्या कम गर्नका लागि जिम्बाबेले सन् २००९ मा आफ्नो देशको पैसा छाप्न नै बन्द गर्नुपरेको थियो र अन्य देशको पैसा प्रयोग गर्नुपरेको थियो । जिम्बाबेमा ब्ल्याक मार्केट निकै बढेको थियो ।
आदरिणय दर्शकबिन्द, तपाईले किन पैसा भनेको जति छाप्न मिल्दैन भन्ने कुरालाई आजको भिडियोबाट बुझिसक्नु भएको छ । मैले यहाँ विभिन्न श्रोतहरुको खोजी गरी यो भिडियो तयार पारेको हुँ । यस बाहेक पनि तपाईँलाई यस बारेमा जानकारी छ भने हामीलाई कमेन्टमा बताउनुहोस् । यस्तै अन्य भिडियोका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्न नभुल्नुहोस् ।
जीवन खोज्दै काठमाडौँ आएकी मिनाको बाटोमै कडा दोहोरी
अस्मिता डल्लाकोटी र प्रकाश पराजुलीको घमासान दोहोरी
पुष्कल शर्मा र शंकर बिसीले मच्चाए धमाका